ESP32-CAM: zvaunofanira kuziva nezve module iyi | Mahara emahara
ESP32-CAM: zvaunofanira kuziva nezve module iyi
Isu takatoburitsa nezve iyo WiFi module nokuti Arduino imwe nguva, asi ino nguva ndeye module ESP32-CAM, module yeESp32 WiFi ine diki yakavakirwa-mukati vhidhiyo kamera. Izvi zvinobvumidza mashandiro matsva, akadai sekutarisa kana espionage iri kure, kutora zvese zvinoitika kana usipo uye kuzvitumira kune chero chishandiso chekurekodha kana kugona kuona mu-situ.
Zvinenge zvese zvakataurwa nezve module yeWiFi yatatokurukura nezvayo, zvaizoshanda kune iyi, chete kuti iine zvimwe zvidiki zvakasarudzika mukuwedzera kune iyo kamera yakabatanidzwa. Asi zvese zvaunoda kuti uzive isu tiri kuzokuratidza mune ino gwara ...
1 Chii chinonzi ESP32-CAM?
1.1 Tenga imwe
1.2 Unyanzvi hunhu hweESP32-CAM (dhatasheet)
2 Kubatanidzwa neArduino IDE
Chii chinonzi ESP32-CAM?
El ESP32-CAM Iyo module iwe yaunogona kushandisa neakawanda mapurojekiti, uye neArduino. Iyo yakazara module ine yakasanganiswa microcontroller, iyo inogona kuita kuti ishande yakazvimiririra. Pamusoro peiyo WiFi + kubatana kweBluetooth, iyi module ine zvakare yakasanganiswa vhidhiyo kamera, uye microSD slot yekuchengetedza.
Iyi module haina kudhura zvachose, uye iwe unogona kuva nayo kuwanda kwekushandisa. Kubva pane imwe yakapusa IoT, kune imwe yakanyanya kufambira mberi yekutarisa mifananidzo nekucherechedzwa uchishandisa AI, uye kunyangwe sisitimu yekutarisa kutarisa zvinoitika munzvimbo kure kure chero kwauri ...
Iyo ESP32-CAM module haina kudhura zvachose, sezvandataura, kwemama euro mashoma iwe unogona kuva imwe. Uye iwe unogona kuiwana zviri nyore mune zvimwe zvitoro zvine hunyanzvi kana paAmazon. Semuenzaniso, heano mamwe mazano pamutengo wakanaka:
Vaviri ESP32-CAM zvikamu kukwira chishandiso chekutarisa kwakawanda.
ESP32-CAM ine kanyanga 8 dBi mbiri-bhendi uye tambo yeakakura kufukidza renji.
Kana iwe uchitova neEMP32 module uye uchingoda kamera chete, unogona chitenge zvakasiyana.
Uye kana iwe uchida kuti ive yakakwana kuita neUSB: ESP32-CAM + FTDI module.
Sezvauri kuona, haina kudhura ...
Unyanzvi hunhu hweESP32-CAM (dhatasheet)
Iyo ESP32-CAM module ine zvimwe hunyanzvi hunhu zvinonakidza kwazvo zvekuti iwe unogona kuona mu datasheet mugadziri. Pano ini ndinopfupikisa akakosha pane aya:
Kubatana: WiFi 802.11b / g / n + Bluetooth 4.2 ine BLE. Inotsigira mufananidzo kurodha kuburikidza neWiFi.
Kubatana: UART, SPI, I2Cuye PWM. Ine 9 GPIO pini.
Clock frequency: kusvika 160Mhz.
Microcontroller komputa simba: kusvika ku600 DMIPS.
Memory: 520KB ye SRAM + 4MB yePSRAM + SD kadhi slot
Extras: ine akawanda ekurara modes, firmware inokwidziridzwa neOTA, uye maUSS ekushandisa kweyakavakirwa-mukati flash memory.
Camera: Inotsigira OV2640 makamera anogona kuuya mupakeji kana kutengwa zvakazvimiririra. Aya marudzi emakamera ane:
2 MP pane yako sensor
1622 × 1200 px UXGA yakakura saizi
Mhando yekuburitsa YUV422, YUV420, RGB565, RGB555 uye 8-bit kudzvanya dhata.
Unogona kuendesa mufananidzo pakati pe15 ne60 FPS.
El pinout yeESp32-CAM iri nyore kwazvo, sezvaungaona mumufananidzo wapfuura. Uye kamera yakabatana nechokubatanidza icho chinogoneswa icho. Zvino, nemuenzaniso weArduino, iwe unonzwisisa zvirinani kuti yakabatana sei uye ndeyei yega yega, kunyangwe iwe uchitogona kuwana zano.
Nenzira, kunyangwe isingaoneke mumufananidzo, ivo vanowanzove neyakaunganidzwa yakatenderera paPBB iyo inoshandiswa kubatanidza tambo dzekunze dzetena mune dzimwe nguva. Inowanzo kuve padhuze nesheet simbi yesocket SD.
Unogona kushandisa FTDI yekunze adapta kubatanidza iyi module uye nekuita kuti zvive nyore kwauri kuti uitungamirire. Izvi zvinobvumidza kushandiswa kwe miniUSB mhando chiteshi pachinzvimbo cheESP32-CAM wiring. Kuti ushandise imwe yeaya ma module, unogona kuisanganisa seizvi:
Gadzira iyo FTDI module kuti ishande pa3.3v.
Jumper iyo GPIO pini 0 uye GND yeESP32-CAM module.
Iyo 3v3 pini yemu module inofanira kunge yakabatana neVcc yeiyo FTDI.
Iyo GPIO 3 (UOR) yemo module ichaenda kuTx yeiyo FTDI.
GPIO 1 (U0T) yemo module inoenda kuRX yeiyo FTDI.
Uye iyo imwe GND yeESP32-CAM ine GND yeiyo FTDI module.
Iye zvino une imwe USB mhando interface, iyo inogona kufambisa kubatana kweprojekiti yako ...
Kubatanidzwa neArduino IDE
Kuti uwane sangana ne FTDI, iko kubatana kuri nyore. Iwe unongofanirwa kuita zvinotevera:
Unganidza iyo 5v kubatana kweESP32-CAM module kune Vcc yeiyo FTDI module.
Unganidza GND yeESP32-CAM module kuGND yeiyo FTDI module.
TX0 kubva kubhodhi reFTDI inoenda kuGPIO 3 (U0RXD).
RXI kubva kubhodhi reFTDI inoenda kuGPIO 1 (U0TXD).
Uye inodarika GPI0 uye GND yeESP32-CAM bhodhi.
Iye zvino unogona kuibatanidza kune komputa uchishandisa tambo ye USB kuburikidza neiyo FTDI module. Imwe sarudzo ndeye batanidza iyo arduino zvakananga, pasina kushandisa iyo FTDI module. Asi ngatione nyaya neiyo FTDI iri nani kune mazhinji kesi ...
ari matanho ekutevera kugadzirisa uye kuronga zvese kuti zvishande:
Kuti ugone kuisa kodhi kubhodhi, unofanirwa batanidza USB kuPC yako.
Nhanho inotevera ndeyekuisa iyo ESP32 raibhurari kukwanisa kutora mukana weuyu. Nezve izvo, kubva kuArduino IDE enda kuFaira> Zvaunoda> Ikoko, mumunda kuwedzera URL, wedzera: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json wobva wadzvanya OK. Zvino enda kuZvekushandisa> Bhodhi> Bhodhi Manager> tsvaga ESP32 uye dzvanya gadza "ESP32 neEspressif Systems"
Wobva wavhura Arduino IDE > Zvishandiso> Mabhodhi> sarudza AI-Funga ESP32-CAM (unofanirwa kunge uine iyo ESP32 addon yakaisirwa iyi sarudzo kuti ioneke mumenyu). Wobva waenda kune Zvishandiso> Port uye sarudza COM, uko bhodhi rako rakabatana.
Zvino unogona upload sketch pabhodhi, kuti zvirambe zviri nyore, shandisa imwe yemienzaniso ona File> Muenzaniso> ESP32> Kamera> CameraWebServer. Paunenge wapedza, kana meseji yekuti yakatakurwa zvabudirira yaonekwa, bvisa tambo kubva kuGND GPIO pini 0 uye tinya bhatani reReset pabhodhi.
Pakupedzisira, unogona kushandisa uye kutanga ona mhedzisiro muwebhu interface ... Kana iwe uchimhanya iyo, inokupa iwe pane iyo yekutarisa URL ine IP iyo iwe yaunofanirwa kuisa mune yako webhu browser kuti uwane. Kubva mairi unogona kugadzirisa parameter uye ona izvo zvinoonekwa kubva kune kamera kamera.
Zviripachena, iwe unogona ita zvakawanda kutora mukana weiyo WiFi neBluetooth kugona kweiyi module. Rangarira kuti muganho ndiko kufunga kwako. Pano ini ndinongokuratidza sumo yakapusa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Zvemagetsi zvigadzirwa » ESP32-CAM: zvaunofanira kuziva nezve module iyi
Zvese zvinonyatsotsanangurwa, uye chirongwa chinoremerwa zvakakwana, asi pandinogadzirisa ESP32 kuti ndione Wi-Fi pane serial monitor, ini ndinogara ndichiwana yakafanana kamera kukanganisa:
E (873) kamera: Kuongorora kwekamera kwakundikana nekukanganisa 0x105 (ESP_ERR_NOT_FOUND)
Camera init yakundikana nekukanganisa 0x105
Iyo inonyanya kuitika nekuda kweiyo kamera module yekubatanidza kana isina kufanira magetsi magetsi.
Edza kusimbisa izvo zvinhu zviviri.
BeagleV: itsva inodhura SBC yekusimudzira uye yakavakirwa paRISC-V
Electroscope: maitiro ekugadzira imwe imba uye mashandisiro